Wararka Maanta | SomaliSwiss Wararka Somaliswiss
Home / Archive by category Wararka Maanta
Dhaqashada Bisada oo korortay dalkaan Switzerland
Seddex Qoys oo Swiss mid ka mid ah baa leh Bisad ( Mukulaal ). 1.6 Bisado ayaa ku nool dalkaan Switzerland kuwaas oo hela xanaano iyo kaalmo dhamaystiran. balse dhibaato waxa ay ka taagantahay dadka dagan guryaha kiradaha ee dabaqa dheer kuwaas oo u baahan ogolaansho marka ay jaran jaro u saarayaan dabaqa sare si […]
Dallada Afrikaanka Basel oo qabtay Workshopsgii ugu horeeyay.
Dallada Afrikaanka ee Basel iyo Hareeraheeda oo qabtay Workshops-gii ugu horeeyay Shalay . Munaasabada oo ay ka soo qeeybgaleen Jaaliyada Soomaaliya iyo Walaalaha kale ee Afrikaanka ayaa si wanaagsan ku soo dhamaatay. ka qeeyb galayaasha Siminaarka ayaa dalbaday in loo joogteeyo Aqoon kororsiga iyagoo sidoo kale bogaadiyay Madaxda dalada Afrikaanka. Somaliswiss.com Media in Switzerland
Maxkamadda darajada 1-aad ee G/Nugaal ayaa maanta xukun adag ku riday rag loo heysto kufsigii iyo dilkii loo geystay Caa’isho Ilyaas oo 12 jir aheyd.Illaa toban eedeysane oo lala xariirinayo falkaasi ayaa la soo hor istaajiyay fadhiga maxkamadda. Guddoomiyaha Maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal Sheekh Cabdinuur oo ku dhawaaqay xukunka ayaa sheegay in saddex ka […]
Haweenka waxbartay oo kordhay dalkaan Switzerland
Heerka tacliinta sare ee gabdhaha dalkaan Switzerland ayaa kor u kacay 20kii Sano ee u dambeeyay. Haweenka wax bartay ee Shahaadooyinka sare heeysta ayaa gaaray 42.3.% halka ragu ay yihiin 34.7% taas oo ah markii ugu horeeysay ay haweenku horseed u noqdaan waxbarashada tacliinta sare. balse haweenka ayaa wali shaqeeya (Part Time ) Shaqo aan […]
Wasiirka Caafimaadka Switzerland Alain Berset oo booqday Afrikada Dhexe
Wasiirka Caafimaadka Switzerland mudane Alain Berset oo booqasho ku tagay dalka Africa Dhexe ayaa la kulmay Madaxweynaha dalkaas mudane Faustin Archange Touadera. Alain Berset ayaa Madaxweeynaha Africada dhexe kala hadlay xaaladaha dalkaas ee murugsan iyo wadahadalada Kooxaha ku kacsan dowlada Africada dhexe. Mudane Berset ayaa sidoo kale booqday qaar ka mid ah Xiryaha Qaxootiga ay […]
Jiirka (Dooli ) oo ka qeeyb galaya Baaritaanada Miinooyinka.
Xayawaanka Jiirka ayaa la ogaaday in uu yahay mid Caqli iyo garasha u saaxiib ah hadii uu halo tababar dhamaystiran. Seynisyahanka reer Biljam Bart Weetjens oo keenay fikirkaan la xiriita tababarka Dooliga kaas oo marka uu helo Maadooyinka la xiriira Bombooyinka iyo wax yaabaha qaraxa sanka la raacaya isla markaan culayskii oo yar aysan ka […]
DFS Oo shaacisay magacyada saraakiil lagu dilay Sh/ Hoose
Ciidamada kumaandooska Soomaaliya ee Danab oo taageero ka helayo Ciidamo Mareykan ah ayaa Howlgalo qorsheysan ka fuliyay degaano ka tirsan Gobolka Shabellada Hoose. Ciidamada Danab iyo Ciidamada Mareykanka ayaa Howlgalka ka fuliyay halka loo yaqaano Baladul Amiin iyo Hanti wadaag oo hoostaga degaanka Janaale ee Gobolka Sh/ Hoose. Saraakiil ka tirsan Kumaandooska Soomaaliya oo la […]
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta booqday Ciidamo isku dhaf ah oo loo diyaarinayo xoraynta Gobolka Jubbada Dhexe iyo isku furista Degmooyinka Gobolka Jubbada Hoose kuwaas oo waayadii u danbeeyay tababar iyo isku habayn lagu waday.Madaxweynaha oo ay wehelinayaan Taliyayaasha Ciidamada ugu Sareeya iyo qaar kamid ah Masuuliyiinta Dowlada waxaa uu […]
Madaxweyne Gaas Oo fariin u diray golaha wakiilada P/land
Madaxweynaha Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas oo la hadlayay Warbaahinta ayaa marka hore Hambalyo u diray xubnaha cusub ee guddoonka golaha wakiilada maamulkaasi oo shalay lagu doortay magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal.Madaxweyne Gaas ayaa ka dalbaday guddoonka cusub in ay ka shaqeeyaan qabsoomida doorashada Madaxweyne ee Puntland. Sidoo kale waxa uu intaasi ku daray […]